2 Madzimambo 1 | Bhaibheri repaIndaneti | Shanduro Yenyika Itsva
2 Madzimambo 1:1-18
1 Zvino pashure pokunge Ahabhi afa,+ vaMoabhi+ vakamukira+ Israeri. 2 Ahaziya akawira pasi+ nepahwindo raiva nesefa reimba yake yepadenga+ yaiva muSamariya, akarwara. Naizvozvo akatuma nhume, akati kwadziri: “Endai mubvunze+ Bhaari-zebhubhu+ mwari weEkroni+ kana ndichizopora pakurwara uku.”+ 3 Asi ngirozi+ yaJehovha yakati kuna Eriya muTishbhi:+ “Simuka uende kunosangana nenhume dzamambo weSamariya, uti kwadziri, ‘Pakati paIsraeri hapana Mwari+ zvachose here, zvamuri kuenda kunobvunza Bhaari-zebhubhu mwari weEkroni? 4 Naizvozvo zvanzi naJehovha: “Hauzoburuki pamubhedha pawakakwira, nokuti chokwadi uchafa.”’”+ Nokudaro Eriya akaenda. 5 Nhume dzacho padzakadzoka kwaari, akabva ati kwadziri: “Madzokerei?” 6 Naizvozvo dzakati kwaari: “Kune murume auya kuzosangana nesu, akati kwatiri, ‘Dzokerai kuna mambo akutumai, muti kwaari: “Zvanzi naJehovha,+ ‘Pakati paIsraeri hapana Mwari zvachose here, zvauri kutuma vanhu kunobvunza Bhaari-zebhubhu mwari weEkroni? Naizvozvo, hauzoburuki pamubhedha pawakakwira, nokuti chokwadi uchafa.’”’”+ 7 Iye akati kwavari: “Murume wacho auya kuzosangana nemi akakuudzai mashoko aya anga akaita sei?” 8 Naizvozvo vakati kwaari: “Murume akapfeka nguo yemvere,+ akasunga bhandi reganda muchiuno make.”+ Akabva ati: “NdiEriya muTishbhi.” 9 Zvino akamutumira mukuru wevanhu makumi mashanu aine vanhu vake makumi mashanu.+ Paakakwira kwaaiva, akamuona agere pamusoro pegomo. Zvino akati kwaari: “Munhu waMwari wechokwadi,+ zvanzi namambo, ‘Burukai.’” 10 Asi Eriya akapindura mukuru wevanhu makumi mashanu akati: “Kana ndiri munhu waMwari, moto+ ngauburuke kumatenga uparadze iwe nevanhu vako makumi mashanu.” Zvino moto wakaburuka kumatenga ukaparadza iye nevanhu vake makumi mashanu.+ 11 Naizvozvo akamutumira mumwe mukuru wevanhu makumi mashanu aine vanhu vake makumi mashanu.+ Iye akamupindurawo akati: “Munhu waMwari wechokwadi, zvanzi namambo, ‘Burukai nokukurumidza.’”+ 12 Asi Eriya akavapindura akati: “Kana ndiri munhu waMwari wechokwadi, moto ngauburuke kumatenga uparadze iwe nevanhu vako makumi mashanu.” Zvino moto waMwari wakaburuka kumatenga ukaparadza iye nevanhu vake makumi mashanu. 13 Akatumazve mukuru wevanhu makumi mashanu wechitatu aine vanhu vake makumi mashanu.+ Asi mukuru wevanhu makumi mashanu wechitatu akakwira, akasvika, akapfugama+ nemabvi ake pamberi paEriya, akatanga kumuteterera+ kuti anzwirwe nyasha, akati kwaari: “Munhu waMwari wechokwadi, ndapota, mweya wangu+ nemweya yevashandi venyu makumi mashanu ngaive inokosha+ kwamuri. 14 Onai moto waburuka kumatenga ukaparadza+ vakuru vaviri vevanhu makumi mashanu vatanga kuuya, mumwe nomumwe nevanhu vake makumi mashanu, asi zvino mweya wangu ngauve unokosha kwamuri.” 15 Ngirozi yaJehovha yakabva yati kuna Eriya: “Buruka naye. Usamutya.”+ Naizvozvo akasimuka, akaenda naye kwaiva namambo. 16 Akabva ati kwaari: “Zvanzi naJehovha, ‘Zvawakatuma nhume+ kuti dzinobvunza Bhaari-zebhubhu mwari weEkroni,+ pakati paIsraeri hapana Mwari zvachose here wokuti ubvunze? Naizvozvo hauzoburuki pamubhedha pawakakwira, nokuti chokwadi uchafa.’” 17 Iye akazofa+ maererano neshoko+ raJehovha rakanga rataurwa naEriya; uye Jehoramu+ akatanga kutonga panzvimbo pake, mugore rechipiri raJehoramu+ mwanakomana waJehoshafati mambo waJudha, nokuti iye akanga asina kuva nomwanakomana. 18 Zvimwe zvinhu zvose zvakaitwa naAhaziya,+ hazvina kunyorwa here mubhuku+ remabasa emazuva emadzimambo aIsraeri?